Wararka - Waxaan ka qeyb gali doonnaa Bandhigga Chinaplas 2021 ee Shenzhen laga bilaabo 13 -ka Abriil illaa 16 -ka Abriil.
Waxaan ka soo qeyb geli doonnaa bandhigga CHINAPLAS 2021 ee Shenzhen laga bilaabo 13 -ka Abriil illaa 16 -ka Abriil.
Kuwa soo socda ayaa ah macluumaadka faahfaahsan ee bandhigga:
Booth Our .: 16W75
Taariikhda Bandhigga: 13 -ka, Abriil. ilaa 16 -ka, Abriil.
Alaabtayada: xaashiyaha PVC, xaashiyaha PP, xaashiyaha HDPE, usha PVC,
Tuubooyinka UPVC iyo rakibitaannada, tuubooyinka HDPE iyo rakibidda
Tuubooyinka PP & PPR iyo rakibidda, PVC alxanka alxanka PP astaamaha PP.
Boggayaga internetka: www.ldsy.cn www.lidaplastic.com
Waxaan filaynaa booqashadaada!
Sharaxaada warshadaha caaga
Caaggu wuxuu la xiriiraa walxo leh walxo dabiici ah oo isku-dar ah ama isku-dar ah oo la isku hallayn karo oo si fudud loogu qaabayn karo walxo adag. Guryahooda farsamada iyo kuleylka-cimri dherer, adkaysi u adkaysiga iyo dabacsanaan la'aan-waxay ka dhigaan qaybo ku habboon wax soo saarka. Marka balaastigga loo isticmaalo sidii qaybo ka mid ah soo saarista qalabka asalka ah (OEM), waxaa mararka qaarkood loogu yeeraa caagadaha injineernimada.
Caagagga waxaa lagu yaqaan inay leeyihiin sifooyin waxqabad sare leh. Waxay yihiin keydinta miisaanka, insulators wanaagsan, si fudud u kululeeyaha iyo kiimikada u adkaysta, oo aan ku xusin wax-ku-ool ah. Markaa, qaar ka mid ah caagadaha injineernimada ee ugu caansan warshadaha balaastikada, marka laga reebo caag isku -darka ah - sida Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) oo loo adeegsado kormeerayaasha kombiyuutarka, daabacayaasha iyo daboollada keyboard -ka, Polyurethanes (PU) oo loo isticmaalo qaybo caag ah oo adag oo ah qalabka elektaroonigga ah ama hakinta baabuurta , Polycarbonate (PC) oo loo isticmaalo cajalladaha is haysta, MP3 iyo kiisaska taleefanka iyo laambadaha baabuurta, Polyethylene (PE) oo loo isticmaalo daboolyeyaasha fiilada iyo kiish caag ah iyo Polypropylene (PP) oo loo isticmaalo qalabka elektaroonigga ah ee macmiilaha, gaashaanka baabuurta (bumpers) iyo nidaamyada tuubooyinka cadaadiska caagga ah ) –Waxay bedeshay qalabkii kale ee injineernimada sida birta iyo qoryaha.
Tan iyo 2013, Shiinuhu wuxuu noqday soosaaraha balaastigga ugu weyn adduunka, oo ku dhawaad ​​afar meelood meel ka ah wax soo saarka balaastikada adduunka, sida uu qabo Statista. Warshadaha balaastigga ee Shiinaha ayaa goob joog u ahaa wax soo saarka wax soo saarka sanadihii la soo dhaafay, iyada oo ay ugu wacan tahay baahida sii kordheysa ee balaastikada injineernimada ee warshadaha heer-sare ah sida shirarka baabuurta iyo soo-saarka elektiroonigga. Sannadkii 2016, waxaa Shiinaha ka jiray in ka badan 15,000 oo shirkadood oo wax soo saarka caagga ah, iyadoo wadarta dakhliyada iibku ay gaareen qiyaastii 2.30 tiriliyan CNY (US $ 366 bilyan). Wax -soo -saarka balaastikada gudaha laga bilaabo 2017 illaa 2018 wuxuu gaaray ilaa 13.95 milyan oo tan oo badeecooyin caag ah iyo qaybo caag ah.